Momba anay - Zhejiang Leihao Electric Co., Ltd.
TONGA TONGA AO LEI HAO
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasa Zhejiang Leihao Lightning Protection dia manana ekipa R&D afaka manara-maso sy mandray ny teknolojia mandroso iraisam-pirenena ary manana fahafahana hanohy ny fanavaozana. Ny fanavaozana tsy miankina no hery mitarika amin'ny fampandrosoana ny orinasa, avy amin'ny famolavolana, ny famokarana, ny fonosana sy ny fitsapana, ny varotra mivantana ary ny fivarotana aorian'ny varotra. Ny serivisy dia mitambatra, ary ny marika tsy miankina dia nametraka fiantraikany lehibe amin'ny fiarovana ny firongatry ny trano sy ny fitaovana fiarovana ny tselatra. Amin'ny ho avy, ny orinasa dia hanohy hanamafy orina ny vokatra teknolojia fikarohana sy ny fampandrosoana sy ny fanitarana ny tsena, optimize vokatra deconstruction, ary miezaka ny ho lasa-kilasy tselatra fiarovana sy ny firongatry ny fitaovana fiarovana mpamatsy miorina amin'ny mpitarika ao an-toerana.
Izahay dia niasa tao anatin'ny taona vitsivitsy, noho ny fanohanana maharitra sy ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa vaovao sy taloha ao an-trano sy any ivelany, ny vokatra dia amidy manerana ny firenena, ary aondrana any Azia Atsimoatsinanana, Rosia, Afovoany Atsinanana, Afrika Atsimo sy ireo firenena sy faritra hafa. Manoloana ny fampidirana eran-tany amin'izao fotoana izao, dia manome serivisy kilasy voalohany izahay, Ny kalitaon'ny vokatra kilasy voalohany sy ny vidiny manokana dia miara-miasa amin'ny mpanamboatra ao an-toerana sy any ivelany mba hahatratrarana toe-javatra mandresy.
Manam-pahaizana momba ny fiarovana ny tselatra
Ny orinasa dia manana manam-pahaizana manokana momba ny fiarovana ny tselatra izay manatsara ny fahalalana teorika sy traikefa azo ampiharina. Izy io no fototry ny orinasa R & D, fitsapana, famokarana, fitantanana kalitao, fanohanana ara-teknika injeniera;
Ny orinasa dia mifikitra amin'ny "fahamarinana, fanavaozana, fikatsahana asa, mahomby" kolontsaina orinasa, Amin'ny alàlan'ny teknolojia mandroso sy ny fitantanana fanatsarana, ny mpiaro LeiHao dia nampiasaina betsaka tamin'ny herinaratra, fifandraisana, meteorolojia, fiarovana, fitantanam-bola, hopitaly, fitaterana, fanaraha-maso indostrialy, petrochemical, angovo vaovao, sns.
Ny kalitaon'ny vokatra dia ankasitrahan'ny mpanjifa, mankafy ny laza avo indrindra, ary ny orinasa dia manana rafitra fitantanana mialoha ny varotra, fivarotana, serivisy serivisy aorian'ny varotra mba hanomezana izay ilain'ny mpampiasa amin'ny sehatra isan-karazany.
Ny vokatra LEIHAO dia amidy amin'ny firenena 20 mahery, manompo mpanjifa an'arivony manerantany.
Ny raharaham-barotra an-trano dia ahitana faritany sy tanàna maherin'ny ampolony manerana ny firenena.
Miely indrindra any: Beijing, Shanghai, Hangzhou, Chongqing, Sichuan, Guangzhou, Hunan, Hubei, Shenzhen, Fujian, Jiangsu, Hebei, Henan, Jiangxi, Guizhou, Yunnan, Anhui, sns.
Ny orinasa dia vonona ny hiara-hiasa amin'ny mpanjifantsika, mifanaraka tanteraka amin'ny fitsipiky ny "teknolojia mandroso, ara-toekarena ary ara-dalàna", fanoloran-tena hanome vokatra avo lenta sy serivisy tonga lafatra ho an'ny mpanjifa vaovao sy taloha.
Ny orinasa dia mandray am-pahatsorana ireo namana avy amin'ny lafim-piainana rehetra hitsidika sy fiaraha-miasa tsy tapaka!